Gudoomiyaha barlamanka Somali oo la kulmaya maanta madaxda Turkiga |
Gudoomiyaha barlamanka Somali oo la kulmaya maanta madaxda Turkiga
Gudoomiyaha barlamanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cisman Jawaari oo ku sugan dalka Tukiga ayaa la filayaa in uu maanta la kulmo Madaxda dalkaasi sida Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Recep Dayib Urdugon.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sidoo kale la kulmaya maanta dhigiisa Gudoomiyaha barlamanka Turkiga , kaasi oo kala hadli doono arrimaha la xiriira wada shaqeynta labada barlaman iyo dhismaha Xarunta barlamanka.
Sidoo kale Gudoomiyaha waxa uu madaxda kale oo la kulmi doono kala hadlayaa arrimaha amaanka iyo horumarinta dalka Soomaaliya si Turkiga ay gacan uga gaysato sida uu xaqiijiyay Xoghayaha Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga.
Wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ku jira guddoomiyeyaasha guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka qaarkood iyo saraakiil ka tirsan xafiiskiisa.
Dhawaan ka filo shabakda casriga ah ee Somalinimo1.com warbixintaani oo muuqaal ah.